အိမ် - လုံးချင်းအိမ်_၂ထပ်တိုက်_ငှားရန်ရှိသည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: လုံးချင်းအိမ်_၂ထပ်တိုက်_ငှားရန်ရှိသည်
🏡 လုံးချင်းအိမ်_၂ထပ်တိုက်_ငှားရန်ရှိသည် 🏡 ++++++++++++++++++++++++++++++ 📣 တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၁၄/၁၅လမ်းဆုံအနီး 📣 ရတနာလမ်းကျောကပ်၊ ၂ ထပ်တိုက် 📣 အကျယ်အဝန်း ( ၄၀ပေ × ၆၀ပေ ) 📣 1-Master bedroom, 1-Bedroom. 📣 ကြွေပြားခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး၊ ရေချိုးခန်း/အိမ်သာ (၂)စုံ၊ အပေါ်ထပ်လျှာထိုးခင်း။ 🏆 မိသားစုနေထိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရန်၊ လူနေ/ရုံးခန်း၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်း ဖွင့်ရန်၊ ပစ္စည်းထားရန် အထူးသင့်တော်သည်။ 💰 စျေးနှုန်း_၅သိန်း 📲📲📲📲📲 09-752757547,09-778969226. 09-250998522,09-340185131.